Mkpota si KARDEMİR rue Minister nke Mmeputa na Teknụzụ Mustafa Varank | RayHaber
[04 / 12 / 2019] Mbido Ọgba Ọsọ Dị Uwe Ọhụrụ na Kapikule	22 Edirne
[04 / 12 / 2019] ORBEL bịanyere aka n'akwụkwọ nkwado Protocol maka ndị nkuzi na ụmụ akwụkwọ	52 Army
HomeTurkeyCentral Anatolia Region78 KarabukNkọwa sitere na KARDEMİR ka Minista nke Ụlọ Ahịa na Technology Mustafa Varank
Nkọwa sitere na KARDEMİR ka Minista nke Ụlọ Ahịa na Technology Mustafa Varank
20 / 07 / 2019 Levent Elmastaş 78 Karabuk, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey
ụlọ ọrụ na nkà na ụzụ na-ekwu okwu mustafa varanka
Minister of Industry and Technology Mustafa Varank, KARDEMİR General Manager Dr. KARDEMİR banyere mmepụta ngwaahịa na-arụ ọrụ maka ụgbọ okporo ígwè na-akwọ ụgbọala na-echekwa ụlọ ọrụ, onye na-eme nnyocha na-aga n'ihu. Ọ natara ozi n'aka Hüseyin Soykan.
Ụnyaahụ 3 gara aga na mpaghara Zonguldak Çaycuma. Western Black Sea Building, mgbe ịga oghere ememe nke Decorations na ngwá ụlọ Fair Filyos agafe otu n'ime Turkey kasị ukwuu na ọdụ ụgbọ mmiri nke Filyos Port kwuru na Construction Industry na Technology Minister Mustafa Varank, KARDEMİR CEO Dr. O zutere Hüseyin Soykan ma nata ozi banyere ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè na mmepe ngwaahịa maka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwá ọrụ.
Onye isi ọrụ anyị bụ Dr. Varank's Filyos na-eleta. Hüseyin Soykan kwuru na ọrụ Filyos Port bụ otu n'ime sine qua non maka Kardemir. Iyle N'oge a, anyị nwere ohere iji gosipụta atụmanya Kardemir banyere ọdụ ụgbọ mmiri na mgbalị ya n'ịzụlite ngwaahịa ọhụrụ ". General Manager Hüseyin Soykan kwuru ihe ndị a na ntule ya.
"Dịka a maara, n'ọdịnihu dị nso, anyị ga-enweta ikike mmepụta nke 3,5 Million tọn. Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ a, anyị ga-eru ikike 2,9 nde tọn. N'ikwekọ, anyị na-amụba ngwaahịa anyị. Na osisi ugbo 200 anyị nwere ikike nke otu puku nkeji kwa afọ, anyị na-arụ ọrụ iji malite mmepụta ihe. Anyị na-achọ ịmepụta akara nchara maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ngwá ọrụ na nchekwa. Filyos Port bụ ihe dị mkpa maka mbupụ na mbubata ngwaọrụ. Filyos abụghị naanị ọrụ ụgbọ mmiri. Dị ka Maazị Minista si kwuo, tinyere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ebe dịpụrụ adịpụ n'azụ ya, mba anyị ga-enwe ọnụ ụzọ ámá Oké Osimiri Ojii na site n'ebe ahụ ruo ụwa. otu n'ime Turkey si Ịta oru ngo. Anyị, dị ka Kardemir, ga-achọ ịme òkè na nnukwu ọrụ a ma weghachiri Minista anyị ihe ndị anyị na-atụ anya na oge nleta a. Ha kwukwara na ha maara na Kardemir dị mkpa maka ógbè ahụ na mba ahụ, na ha maara mgbalị anyị na-eme iji nweta ígwè maka ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ngwá ọrụ ma na-echekwa na ha nwere obi ụtọ. Ha kwukwara na ha na-echesi ike na mmalite nke mmepụta ihe na steepụ ụgbọ okporo ígwè na na ha ga-abata n'ọnụ ụzọ ya. Ha kelere ụlọ ọrụ anyị karịsịa maka mmepụta nke ngwaahịa bara uru na ihe mgbaru ọsọ 2023 ".
Ford Otosan R&D nke Onye Isi Ala Mustafa Varank
Gọvanọ Demirtaş si TCDD Mpaghara Manager Oğuz Saygılı…
Iji soro n'ime ụlọ ọrụ 20 nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na KARDEMİR
Ozi nke ulo oru na teknụzụ Bozankaya...
Osote onye isi nke ulo oru na nka na ụzụ Büyükdede,…
TÜVASAŞ, Ministry of Industry na Technology enwetara R & D…
Kardemir R & D Center, Mmeputa na Teknụzụ…
Ọchịchọ siri ike na-enweghị ụlọ ọrụ nchara siri ike…
Bursa osote Kayışoğlu, Varank'a Nnwale Automotive…
Onye ozi Varank, BozankayaGburugburu ebe obibi Enyi
Onye ozi Varank na Samsun Logistics Center…
Atụmatụ Bus Busị na Mpaghara Mişmişpark Fair
Ọdịdị ndị na-amalite Tram na-amalite na Yahya
Middle East nka na ụzụ University iji wee n'ọrụ
Onye na - ahụ maka ihe gbasara okpukpe ga - eme ka ndị ọrụ nweta ọrụ site na ajụjụ ọnụ